अमलाचौर स्कूल अल्मुनाई एसोसियसनको तेस्रो साधारणसभा सम्पन्न, अध्यक्षमा पुन: डा. शर्मा – ebaglung.com
अमलाचौर स्कूल अल्मुनाई एसोसियसनको तेस्रो साधारणसभा सम्पन्न, अध्यक्षमा पुन: डा. शर्मा
२०७४ कार्तिक १, बुधबार २१:१०	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
बबिता शर्मा, बागलुङ २०७४ कात्तिक १ । आफुले पढेको विद्यालयको शैक्षिक उन्नतीको लागि क्रियाशील अमलाचौर स्कुल अल्मुनाई एसोसिएसन ‘आशा’को तेस्रो साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । बागलुङ नगरपालिका वडा नं। १२ मा रहेका विद्यालयमा अध्ययन गरेका पूर्व विद्यार्थीहरुको संस्था आशाको तेस्रो साधारणसभाको उद्घाटन पूर्व शिक्षामन्त्री एवं विद्यालयका पूर्व प्रधानध्यापक दीनानाथ शर्माले गरेका थिए ।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व शिक्षामन्त्री शर्माले निस्वार्थ भावनाले शैक्षिक स्तरोन्नतीका लागि स्थापित आशाले अपेक्षाकृत काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै गाउँमा गरिने विकास निर्माणका काममा सबैले साथ दिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं आईएमईं गु््रपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आशाले सुरु गरेको कामलाई आफुहरुले समेत साथ दिएको बताए।
विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी समेत रहेका व्यवसायी ढकाल र उनका भाइ हेमराज ढकालको पहलमा विद्यालयमा ६ करोड बढीको लागतमा विद्यालय भवन निमार्ण सम्पन्नको क्रममा रहेको छ । ढकालले निस्वार्थ भावनाले विद्यालयलाई आफुहरुले सहयोग गर्न पाउँदा भित्रैदेखि खुशी लागेको बताए ।
यस्तै, पूर्व विद्यार्थी एवं नेकपा एमालेका नेता डा सूर्य पाठकले विद्यालयमा शैक्षिक स्तरोन्तीका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । पाठकले अबका दिनमा विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढनपाठनको सुरुवात गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा समाजसेवी एवं आईएमई कोअपरेटिभका अध्यक्ष यज्ञश्वर ढकाल, माउन्ट धौलागिरी कोअपरेटीभका प्रवबन्ध निर्देशक एवं आशाका सल्लाहकार गोविन्द पौडेल, राजमो नेता कृष्ण अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लिला विक लगायतले अल्मुनाईलाई शुभकामना दिएका थिए ।
सो अवसरमा विद्यालयका प्राचार्य प्रेम चापागाईं र बानपा १२ का वडा अध्यक्ष लोकनाथ शर्माले पठाएको लिखित शुभकामना मन्तव्य पढेर सुनाइएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले समेत फ्लोरबाट आफ्नो धारणा राख्दै आशाले अझ वृहत ढंगले सबैलाई समेटेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा आशाका अध्यक्ष डा। हेमराज शर्माले अध्यक्षको प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष दुर्गालाल चापागाईंले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने दुमनाथ शर्माले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यस्तै, आशाका संरक्षक एवं उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सहभागीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विद्यालयमा निर्माण हुँदै गरेको भवनबारे जानकारी गराएका थिए ।
बुधबार सम्पन्न साधारणसभाले १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति र तीन अलग अलग क्षेत्रमा क्षेत्रीय समिति समेत गठन गरेको छ ।
कार्यसमितिको अध्यक्षमा डा। हेमराज शर्मा चयन भएका छन् भने उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल र महासचिवमा राजन पौडेल चयन भएका छन् । यस्तै सचिवमा कृष्ण पौडेल र कोषाध्यक्षमा दुर्गालाल चापागाईं चयन भएका छन् । कार्यसमिति सदस्यहरुमा डा। ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल, मित्र पौडेल, बविता शर्मा, नवराज पौडेल, निशान विश्वकर्मा र सुजन परियार रहेका छन् । दुई सदस्य कार्यसमितिले पछि चयन गर्ने भएको छ । संचार संयोजकमा चिरन शर्मा चयन भएका छन् । यस्तै बागलुङ क्षेत्रीय संयोजकमा गोविन्द बहादुर पौडेल ९गोपाल०, पोखरा क्षेत्रीय संयोजकमा दुमनाथ शर्मा र चितवन क्षेत्रीय संयोजकमा दुर्गा ढकाल रहेका छन् ।